आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज
काठमाडौं– सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ । संविधानको धारा ११९ अनुसार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज अपराह्न ४ बजे बोलाइएको संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र […]
भारतको चुनावको प्रभाव नेपालको भान्छासम्म ? किन बढ्यो तरकारीको मुल्य
आन्तरिक उत्पादनले थेग्न नसकेपछि काठमाडौ लगाएत मुलुकभर हरियो तरकारीको मुल्य छोईनसक्नु भएको छ । भारतमा दुई महिनासम्म चलेको चुनावी अभियानका कारण भारतबाट नेपाल भित्रने तरकारीको मात्रा घटेपछि नेपाली बजारमा त्यसको असर परेको हो ।
काठमाडौं- साताको पहिलो दिन आज शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ११.९३ बिन्दुले घटेर एक हजार ३०२.६१ अङ्कमा झरेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत २.८२ अङ्कले घटेर २७७.५६ मा ओर्लिएको छ । रु एक अर्बमाथिको कारोवार हुँदै […]
जेठ महिना सुरु भएसँगै बजारमा तरकारीको भाउ अत्याधिक बढेको छ । महँगीको सबैभन्दा धेरै प्रभाव गोलभेडामा परेको छ । मनसुन सुरु भएसँगै बढ्ने तरकारीको भाउ यस वर्ष जेठको पहिलो सातोदेखि नै बढेको हो । झापाको बिर्तामोडमा रहेको प्रदेश –१ कै ठूलो कृषिथोक बजारमा गोलभेडा प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ (खुद्रा) बिक्री हुँदै आएको छ । गतवर्ष गोलभेडाले […]
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । बजारमा इन्धनको माग बढ्दै गएकाले पेट्रोलियम पदार्थ सबैभन्दा धेरै आयात भएको हो । मुलुकमा आयात हुनेमा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याकंअनुसार १० महिनामा २ खर्ब ६ अर्ब ९० […]
मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले साना किसान सहकारी संस्थाको सहकार्यमा धानको बिउ वितरण गरेको छ । नगरपालिकाको २ लाख ५० हजार र साना किसान सहकारीको १ लाख ५० हजार सहयोगमा ६ हजार किलो धानको बिउ वितरण गरिएको हो । किसानले २० किलोसम्म धानको बिउ पाउने साना किसान सहकारी संस्थाले जनाएको छ । खेती गर्ने समयमा बिउ अभावमा […]
विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामा कूल रु ३१ अर्ब ७५ करोड ७२ लाख ७४ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले रु ४२ अर्ब ५३ करोड १९ लाख १८ हजार राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । दश महीनाको अवधिमा लक्ष्यमा ७४.६७ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गरेको छ । गएको […]
कोशी प्रभावितको राहतका लागि आएको रकम झ्वाम!
उदयपुर । कोशी सम्झौताको ६५ बर्ष बिते पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भने राहत पाउनबाट बञ्चित भएका छन।
तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नहरुबीच सन् १९५४ मा बहुउद्देश्यीय कोशी सम्झौता हुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा जग्गा र बालीको मुआब्जा दिने बताइए पनि अहिलेसम्म नपाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन ।
विनासकारी भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका विद्यालयको पुर्ननिर्माण तीनवर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य चारवर्ष हुदाँ पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । क्षतिग्रस्त भवनको पुर्ननिर्माणमा दातृ निकायसंगको साझेदारीमा सरकारले धमाधम काम भइरहेको जनाएपनि नुवाकोटका अझै तीन दर्जन विद्यालयको पुर्ननिर्माणको पर्खाइमा छन् । भवन निर्माण नहुदाँ विद्यार्थीहरु टहराको कष्टपूर्र्ण बसाईमा अध्ययन गर्न बाध्य छन् ।